Photo Calendar Maker 2.65 Key...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ Photo Calendar Maker 2.65 လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...!အပြင်းပြေ ကလိတာ ဝါသနာပါတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ အတွက်ပါ...! ဓါတ်ပုံလေးတွေကို Calendar လေးနှင့်တွဲပြီး လုပ်ချင်တဲ့သူတွေ အတွက်ပါ...! Software ကောင်းလေးဖြစ်တာကြောင့်တင်ပေးလိုက်တာပါ...! လုပ်ရတာလည်း လွယ်ကူပြီး ကိုစိတ်ကြိုက် Calendar တစ်ခုကို ဖန်တီးလို့ရပါတယ်...!ကျွန်တော် ပေးထားတဲ့ Name & Key လေးကိုထည့်ပေးမှ အဆင်ပြေမှာပါ...! စိတ်ဝင်စားရင်တော့ အောက်မှာ Mediafire လေးဖြင့်တင်ပေးထားပါတယ်...!
" ဒီမှာယူသွားပါ..." ( 19.76 MB )
No Response to "Photo Calendar Maker 2.65 Key...!"